China TPU Hot gbazee nrapado ihe nkiri maka ndị na-emepụta akwa n'èzí | H&H
Ọkpụrụkpụ / mm 0.05 / 0.06 / 0.08 / 0.1 / 0.12 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.35
Obosara / m / 1m / 1.4m / 1.5m dị ka ahaziri
Mpempe Agbaze 85-125 ℃
Ọrụ nka igwe akpo oku-oku: 150-160 ℃ 10s 0.4Mpa
HD371B sitere na ihe TPU site na mgbanwe ụfọdụ na fomular. A na-ejikarị ya na eriri oyi akwa mmiri na-enweghị mmiri, akwa uwe na-enweghị ntụpọ, akpa na-enweghị ntụpọ, mkpọchi mmiri na-enweghị mmiri, ihe mgbochi mmiri, ihe na-enweghị ntụpọ, uwe ndị nwere ọtụtụ ọrụ, ihe na-atụgharị uche na mpaghara ndị ọzọ. Ngwakọta ngwakọta nke akwa dịgasị iche dịka akwa nylon na akwa lycra, yana ogige njikọta nke PVC, akpụkpọ anụ na ihe ndị ọzọ .Dị ka akwa akwa akwa n'èzí / mkpọchi uwe / mkpuchi akpa / mkpuchi okpu / akara ejiri mara mma.
1. Mmetụta aka dị nro: mgbe etinyere ya na akwa akwa, ngwaahịa a ga-enwe uwe dị nro na nkasi obi.
2. Eri na-eguzogide ọgwụ: Ọ nwere ike iguzogide ma ọ dịkarịa ala ugboro 10 ịsacha mmiri.
3. Ndị anaghị egbu egbu na gburugburu ebe obibi: Ọ gaghị enye isi na-adịghị mma ma ghara inwe mmetụta ọjọọ na ahụike ndị ọrụ.
4. Easy hazie na igwe na oru-eri ịzọpụta: Auto lamination igwe nhazi, azọpụta ọrụ na-eri.
5. Akwa agbaze: Ọ na-ezute arịrịọ na-eguzogide okpomọkụ.
TPU Hot gbazee nrapado ịse na ọtụtụ-eji na n'èzí uwe dị ka placket, cuff laMination na mkpọchi uwe onuete akara nke na-ewu ewu nabatara ahịa n'ihi nke ma ọ dị nro na ala yi mmetụta ma ọ bụ aesthetic ekele. Ọ bụkwa ihe na-eme n'ọdịnihu na iji ihe nkiri gbazee agbaze agbaze maka akara akara kama ịkwa akwa ọdịnala.
HD371B TPU Hot gbazee nrapado ịse na ọtụtụ-eji na embroidered baajị na ákwà labeelu nke na-ewu ewu nabatara uwe manfacturers n'ihi na ọ bụ gburugburu ebe obibi mma àgwà na nhazi mma. Nke a bụ a n'ọtụtụ ebe ngwa na ahịa.
Nke gara aga: Hot gbazee nrapado film maka n'èzí uwe
Osote: Hot gbazee nrapado teepu maka enweghị nkebi uwe ime
Hot gbazee nrapado teepu maka enweghị nkebi uwe ime
Eva Hot gbazee nrapado ihe nkiri maka akpụkpọ ụkwụ